September 13, 2020 2 min read By wardeeq news Reporter
Isbaheysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa bilaabay 11 duulimaad oo cirka ah oo ay ku qaadayaan fariisimaha fallaagada Xuutiyiinta ee caasimada Yemen ee Sanca, sida ay qortay wakaalada wararka ee Xuutiyiinta maamusho ee Saba.
Shan ka mid ah weeraradii Axadii ayaa ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Sanca, halka kuwa kalena lagu bartilmaameedsaday waqooyiga iyo bartamaha magaalada, Saba ayaa soo warisay, iyadoo soo xiganaysa ilo amni.
Ma cadda in ay jiraan wax khasaaro ah iyo in kale.
Sida laga soo xigtay shabakadda warbaahinta Al Arabiya ee Sucuudigu leeyahay, ciidamada isbahaysigu waxay weerareen xeryaha Xuutiyiinta iyo goobaha milatari ee Sanca waxayna burburiyeen afar diyaaradood oo Xuutiyiinta ah oo ku sugnaa saldhigga cirka ee al-Delmi ee waqooyiga Sanca.
Ma jiro wax xaqiijin rasmi ah oo rasmi ah oo ka soo baxay isbahaysiga, oo duulimaadyo ka bilaabay laba goobood oo ku yaal Sanca maalin ka hor.
Weeraradan ayaa daba socday sheegashada Xuutiyiinta ee ah inay bartilmaameedsadeen “bartilmaameed muhiim ah” caasimada Sacuudiga khamiistii, iyadoo la adeegsaday gantaal ballistic ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Isbaheysiga ma uusan xaqiijin weerar ka dhacay Riyadh laakiin waxay sheegeen inay qabteen oo ay burburiyeen gantaalada ballistic-ga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee walxaha qarxa loo adeegsaday ee loo qaaday dhanka boqortooyada khamiistii.
Qaraxyada ka dhaca magaalada Sanca ayaa ahaa kuwo naadir ah tan iyo bishii Sebtember 2019, markii Sacuudiga uu bilaabay wadahadalo aan toos ahayn oo lala galayo kooxda Xuutiyiinta ee Iran la safan, taas oo ay dagaal kula jirtay tan iyo 2015.
Iskahorimaadka ayaa waxaa ku dhintay 100,000 oo qof wuxuuna horseeday waxa ay Qaramada Midoobay ku tilmaamtay dhibaatada bani’aadamnimo ee ugu xun adduunka.
Xuuthiyiinta waxay la wareegeen Sanca iyo magaalooyinkii kale intoodii badneyd 2014 kadib markay meesha ka saareen dowladii uu sacuudigu taageeray ee Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Isbaheysiga Sacuudiga uu hogaaminayo ayaa soo farageliyay sanadkii 2015 si ay isugu dayaan inay Hadi ku soo celiyaan xukunka.
Ka dib markii dab baabi’iyey xero Griig, qaxootigu waxay raadinayaan taageero Yurub